एक ग्राफिक्स कार्ड कसरी चयन गर्न प्रत्येक कम्प्युटर मालिक, जवाफ थाह हुनुपर्छ भन्ने भन्दा चुनौतीपूर्ण र महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको। पहिलो नजर मा यो समस्या नगण्य छ कि जस्तो लाग्न सक्छ। साँच्चै, पहिलो स्टोर जान कम्प्युटर प्रविधिको र प्रस्तावित मूल्य सूची अध्ययन गर्न। विरलै को भिडियो स्तम्भ पङ्क्तिहरू संख्या 20 टुक्रा भन्दा कम छ। कुनै पनि चयन र किन्न! यी कम्प्यूटर घटक माग अहिले छन्। दुर्लभ गणनाको सिस्टम यस्तो निर्णय dispenses। यो यति धेरै साईट प्रयोगकर्ताहरूले ग्राफिक्स कार्ड कसरी चयन गर्न बारेमा सोधे कुनै आश्चर्य छ।
यसमा हामी पछि प्रतिक्रिया हुनेछ। तबसम्म गरेको असतत ग्राफिक्स कार्ड को अविश्वसनीय लोकप्रियता को कारण ठ्याक्कै के हो परिभाषित गरौं। गणना गर्न - शब्द "कम्प्युटर" को अंग्रेजी "कम्प्युटर दफा" बाट आउँछ। र सुरुमा उपकरण गणितीय गणना गर्न अभिप्रेरित। तर, स्थिति परिवर्तन भएको छ पछि: एक सरल कम्प्युटर खेल भइरहेको। यो चेस, समुद्र युद्धमा, एक बोआ constrictor थियो, Tetris ... सूचीमा जान्छ। त्यतिबेला कुनै एक कसरी भिडियो कार्ड, पनि नियन्त्रण संकेत मा सजिलो रूपान्तरण डिजिटल डाटा बन्दुक निगरानी इलेक्ट्रोन गर्न किनभने (टीवी) अंक, सर्कल र लाइनको सङ्ख्या प्रदर्शन गर्न सक्षम छन् छनोट गर्न, लाग्यो। वर्तमानमा, कम्प्युटर ठूलो कैलकुलेटर भन्दा अलि बढी हुन भएको छ।
उहाँले एक भए मल्टिमिडिया सिस्टम सबैभन्दा जटिल खेल आवेदन प्रदर्शन सक्षम। र खेल को आवश्यकताहरु को एक - एक शक्तिशाली ग्राफिक्स कार्ड। तसर्थ, लोकप्रियता र ग्राफिक्स कार्ड कसरी चयन गर्न को प्राकृतिक प्रश्न। सही विकल्प सम्भव धेरै वर्ष अपग्रेड घटक सोच्न छैन लागि बनाउँछ।
हामीलाई Motherboard गर्न ग्राफिक्स कार्ड कसरी चयन गर्न विचार गरौं। यो उपलब्ध स्लट सूची कि खण्ड फेला पार्न बोर्ड गर्न निर्देश पुस्तिका बुक गर्न आवश्यक छ। यो PCI, AGP र PCI-Express हुन सक्छ। हामी घटना क्रममा तिनीहरूलाई प्रस्तुत। बोर्ड एक PCI-Express 16x, ग्राफिक्स कार्ड को विकल्प संग समस्या छ भने हुनेछ। तर AGP र, यसबाहेक, PCI संग, यो यति सजिलो छ। यी स्तर पुरानो भएका छन्, त्यसैले तिनीहरूलाई लागि आधुनिक ग्राफिक्स कार्ड टिप्न छैन। यस मामला मा, सबै भन्दा राम्रो समाधान - नयाँ Motherboard खरीद।
यस विषयमा अर्को बिन्दु ग्राफिक्स कार्ड को विकल्प यसको इन्टरफेस कनेक्टरों भिडियो उत्पादन मा उपलब्ध छ। अब यसलाई वीजीए (डी-उप), dvi HDMI, पोर्ट र दुर्लभ Thunderbolt प्रदर्शन हो। यो आधारमा इच्छित उत्पादन संग एक कार्ड चयन, इन्टरफेस को प्रकारको निगरानी प्रयोग के हेर्न आवश्यक छ, र। कहिलेकाहीं, एक समझौता समाधान रूपमा, तपाईं एडेप्टर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को, तपाईं खरीद मा खर्च गरिने रकम निर्णय गर्नुपर्छ। सामान्यतया साँचो नियममा अधिक महंगा घटक प्रदान राम्रो प्रदर्शन (त्यहाँ अपवाद हुन्छन् हुनत)। कुनै पनि अवस्थामा, चुनिएको भिडियो कार्ड संस्करण 10 (प्राथमिकताको 11) समर्थन गर्नुपर्छ; स्मृति 1 जीबी DDR5 मानक भन्दा कम छ; बस प्रोसेसर-स्मृति 128 वा 256-बिट हुनुपर्छ।
केही वर्ष पहिले एक ग्राफिक्स कार्ड प्रोसेसर चयन गर्न कसरी एक धेरै लोकप्रिय प्रश्न थियो। यसलाई केही मा प्रदर्शन बढ्छ स्तर ट्रिम कि विश्वास थियो। उदाहरणका लागि, AMD प्रोसेसर लागि सल्लाह नै निर्माता कार्डहरू किन्न। वास्तवमा, यी conjectures पूर्ण निराधार हो। NVIDIA भिडियो एडेप्टर कपडे र राम्रोसँग काम AMD प्रोसेसर, र विपरित। यदि यो मामला र यस्तो "चाल" अस्तित्व थिएनन्, ग्राफिक्स कार्ड को निर्माता आफ्नो उत्पादन को क्षमता खरीददारहरूको 50% गुमाउनु हुनेछ। यो स्पष्ट छ।
वेब क्याम कसरी प्रयोग गर्ने
समाक्षीय केबल - एक किफायती मूल्य मा विश्वसनीयता
सुझाव र चाल: कसरी आफ्नो कम्प्युटरमा हेडफोन जडान गर्न
एक गणित तर्क एकाइ (ālū) - यो के हो?
इन्टेल कोर i7-960 प्रोसेसर: समीक्षा, वर्णन, विनिर्देशों र समीक्षा
कसरी Android मा एक हार्ड रिसेट गर्नुहोस् बनाउन: विस्तृत निर्देशनहरू
"मिखाइल Somov" पोत को इतिहास
एक प्रसिद्ध फ्रेंच भोजन। पग्लियो पनीर र चिकन संग सूप खाना पकाउने
मई दिवस गुलाब (नितम्ब गुलाब): विवरण, फोटो
Plasmodium falciparum - धूर्त रोग को स्रोत
Nesdobnoe पेस्ट्री: तस्बिर संग चरण व्यञ्जनहरु द्वारा चरण
परिचालन व्यवस्थापन सही
Hypertrophic पुरानो rhinitis: लक्षण, उपचार विधि, रोकथाम
विश्वसनीय सहायक - भारी टिलर्स
आफ्नो हातले Catamaran। घर catamaran। को catamaran लागि रूपरेखा
सामान्य एनेस्थेसिया अन्तर्गत Gastroscopy। लागि सङ्केत गर्छ